အစိုးရပိုင်သတင်းစာများရဲ့ ချိုးနှိမ်တဲ့၊ ခွဲခြားတဲ့ ၊ စော်ကားတဲ့ အသုံးအနှုန်း | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ကျောက်နီမော် မှ အမျိုးသမီးအတွက်ဟုဆိုကာ အလှူခံစာရွက်များ မလေးရှားတွင် ဖြန်ဝေသူများရှိ
Daw Aung San Suu Kyi is right in suggesting that the violence could have been instigated intentionally »
Tags: Burma, Islam in Burma, June 2012, Muslim, Mya Aye, Rakhine State, Reuters, Yangon
This entry was posted on June 8, 2012 at 2:02 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.